निःशुल्क मृगौला परिक्षणको सेवा लिन स्वास्थ्य मन्त्री थापाको आह्वान
स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले स्थानीयस्तरमै निःशुल्क मृगौला परिक्षणको व्यवस्था गरिएकाले तत्काल मृगौला परिक्षण गर्न सवैलाई आह्वान गर्र्नु भएको छ । नेपाल प्रेस युनियनले काठमाडौमा आयोजना गरेको पत्रकारहरुको निःशुल्क मृगौला परिक्षण
सुत्केरी संवादः ‘आफ्नो राम्रोका लागि देउताको मन दुखाउनुहुन्न’
बाजुरा, हुम्ला र मुगुका गाउँमा अहिले पनि सुत्केरीलाई फोहोर गोठमा, अमानवीय कष्टमा राखिन्छ । ‘नियमित गर्भ परीक्षण’, ‘सुरक्षित मातृत्व’ र ‘पोषणयुक्त खाना’ जस्ता सरकारी प्रचारवाजी भन्दा धेरै पर हदै
गोविन्द केसीको समर्थन गर्दै बाबुराम भट्टराई सडकमा !
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै नयाँशक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई आज सडकमा उत्रिएका छन् । नयाँ बानेश्वरको सडकमा डाक्टरहरु, मेडिकल साइन्सका विद्यार्थी, नयाँ
आईओएमका नवनियुक्त डिन केपी सिंहले राजिनामा दिएका छन् । डा गोविन्द केसीको जीवन भन्दा ठूलो आफ्नो पदन नभएको भन्दै उपकुलपति तीर्थ खनियाँसमक्ष राजिनामा पेश गरेका हुन् । त्रिविले सिंहलाई डिन
किन बदनाम बन्यो सुजाताको रोग ?
बबिता बस्नेत ०२६/२७ सालतिरको कुरा हो । राजा महेन्द्र कञ्चनपुर मुकाम गरेर बसेका बेला रानी रत्नलाई समेत साथ लिई सिकार खेल्न निस्कनुभयो । जुनेली रातमा सिकार खेल्दै गर्दा जरायोलाई ताकेको
मृगौलाका विरामीलाई डायलाइसिल निःशुल्क
काठमाडौं । मृगौलाका विरामीहरुलाई आवश्यक पर्ने संपूर्ण डायलाइसिस निःशुल्क भएको छ । यसअघि हप्तामा दुई पटक मात्रै निःशुल्क डायलाइसिसको व्यवस्था गरिएकोमा अवदेखि जति पटक आवश्यक पर्छ त्यति पटक निःशुल्क भएको
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले उच्चस्तरीय स्वास्थ्य नीति तथा पुनः संरचना समन्वय समिति गठन गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा गठन भएको १३ सदस्यीय समितिमा स्वास्थ्य, संघियता, पुर्नसंरचना, कानुन
‘बाढीबाट विस्थापित भई शिविर तथा अन्यत्र बस्दा महिला झन् बढी जोखिममा पर्ने भएकाले उनीहरूको आधारभूत संरक्षणका लागि प्रयास हुनुपर्छ ।’ कुमार लुइटेल विराटनगर । बाढीले घर बगाएपछि मोरङ डायनियाकी आसमा
डा मनोज भट्टराई के तपाई पर्याप्त निन्द्राबाट बञ्चित हुनुहुन्छ ? मध्यरातमा बिउँझेर चिन्तित मुद्रामा घडीको सुईले टिक–टिक गरेको हेरेर बस्नुभएको छ ? तपाईंलाई निन्द्रा पुगेको छैन? अफिसमा छिर्नेबित्तिकै १० मिनेट
-डा. बाबुराजा अमात्य वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक पुदिना अचारका रूपमा भान्सामा प्रयोग गर्नेदेखि लिएर औषधिका रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ । औषधि होस् वा अचारका रूपमा जसरी प्रयोग गरे पनि यसले शरीरलाई